Ọdịmma Gị Ọdịnaya Ọdịmma Gị, Ọdịdị ma ọ bụ Ikike? | Martech Zone
Ọdịmma Gị Ọdịnaya Ọdịmma Gị, Ọdịdị ma ọ bụ Ikike?
Otu n'ime ihe atụ ndị m na-agwakarị ndị mmadụ ụlọ ọrụ anyị bụ na anyị abụghị ndị na-ere ahịa Jiffy Lube. Ọrụ anyị abụghị ibute gị na ịpụpụ ngwa ngwa, tufuo ihe mmado na windo gị wee hụ gị ọnwa na-abịa. Anyị na ndị ọzọ nọ n'olulu ahụ jiri ụjọ na-akwado ụgbọ ala maka ọsọ ahụ. E nwere ọtụtụ Jiffy Lubes si n'ebe - anyị achọghị ịbụ otu n'ime ha.
Ka ọ na-ezo aka na ọdịnaya, ụlọ ọrụ ndị a na-enye gị akara mmepụta. X nọmba nke posts kwa ọnwa, X ọnụ ọgụgụ nke ndị na-acha ọcha, X ọnụ ọgụgụ nke ihe osise na-efu X dollar. Nkwekọrịta ahụ malitere ma ha na-emepụta. A na-akwụ ha ụgwọ na mmepụta na oge nke ọrụ ahụ na-enweghị nlebara anya na-akwụ ma ị na-emeri agbụrụ ahụ.
Anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-edebanye aha maka atụmatụ a n'ihi na - nke mbụ - enwere ọtụtụ ndị na - ede ederede na - achọ ebe ọrụ na - nke abụọ - ha enwebeghị ike ịmịpụta ọdịnaya n'ime ma mara na ha efunahụ. nye ndị asọmpi ha. N'ụzọ dị mwute, ebe ọ bụ na ha anaghị a attentiona ntị na arụmọrụ nke ọdịnaya ahụ, ha na-anọgide na-efu.
Ọ bụ ụzọ dị larịị nke enweghị nkwụghachi na ntinye ego. Ọ bụ usoro mgbakọ na ngwaahịa na-erugharị.
Usoro nke abụọ anyị na-elele ọtụtụ ụlọ ọrụ idokwa bụ òkè nke olu or ọnụnọ weebụ atụmatụ. Onye a gụnyere ọdịnaya na nkwalite, yana iwu bụ na ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ụzọ mbata ma ọ bụrụ na ị dee karịa ma kwalite ya. Ack… kedu ihe igbu oge. O doro anya, ịmalite olu gị nke olu ga-eme ka ị nwekwuo ndu. Anaghị m ekwenye ma ọlị atụmatụ nke mmepụta na nkwalite, mana ọ na-efu ohere ka ukwuu.
Ọ bụ usoro linear na nkwụghachi azụ ewepụghị na itinye ego. Ọ bụ usoro mgbakọ ngwa ngwa na otu ngwaahịa ahụ.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ike idetu obere ọdịnaya nwere uru karịa, kwalite ya, ma bulie ọchịchọ ọ bụla? Ọ bụ ya mere anyị ji mepee nke anyị njikwa ikike ọdịnaya na ndị ahịa. Ọ naghị agbalite usoro nzukọ na ịgbanye mmanụ mgbanwe. Ọ na-arụ ụgbọ ala ịgba ọsọ wee dọba ya n'ime olulu oge ọ bụla ị gafere ụzọ.
Ọ bụ usoro na-agagharị agagharị na ịlaghachi na ụba na ntinye ego. Ọ bụ usoro nwayọ nwayọ na ngwaahịa dị elu nke na-ere nke ọma.
N'abalị ikpeazụ m gara Nnukwu Data Conference ebe a na Indianapolis. Ndị bịaranụ bụ onye ahịa anyị jere ozi ọtụtụ afọ ruo mgbe ha webatara njikwa azụmaahịa ọhụụ. Onye njikwa ahia ahụ nwere nzụlite na njikwa ihe omume ma lelee weebụsaịtị ka ọ bụrụ karịa broshuọ karia usoro inbound sales. O bepụrụ aka anyị na ụlọ ọrụ mechara tufuo ike ya site na ọchụchọ na mmekọrịta.
N'agbanyeghị nke a, onye ahịa ahụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ kwuru na enweghị obi abụọ ọ bụla, ndị usoro nyocha na anyị mepụtara maka ụlọ ọrụ 3 afọ gara aga ka bụ isi iyi ha kachasị ike nke ndu ruru eru site na weebụ. Nke ahụ bụ ụdị mmemme anyị na-ekwu maka ya ebe a. Na-akwụ ụgwọ karịa taa, mana ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma karịa oge!
Tags: ikike ọdịnayaọdịnaya ọdịnayammepụta ọdịnayaatụmatụ ọdịnayausoro nyochaọnụnọ weebụ
Buzzoole: Mee mkpọsa na ndị na-akwado ndị na-akwado ya na ndị na-emetụta ya
Mee 9, 2015 na 5: 45 AM
Ezigbo saịtị Douglas, nwere ọtụtụ ozi bara uru.
Edere m aha na akwụkwọ akụkọ gị kwa izu.
Mee 11, 2015 na 3: 48 PM